အနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ကား Hacking ပြုလုပ်ခြင်း
အနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ကား Hacking ပြုလုပ်ခြင်း
Thread: အနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ကား Hacking ပြုလုပ်ခြင်း
06-14-2010 05:18 PM #1
ယနေ့ခေတ်ကာလမှာ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့စနစ်ကို နှောက်ယှက်ချိုးဖောက်မှု hacking ဆိုတဲ့စကားလုံးကို အများစုကတော့ အကျွမ်းတ၀င်ဖြစ်နေပါပြီ။ အခုတော့ အဲဒီလိုကွန်ပျူတာတွေကို hacking လုပ်တာဟာ မကြာမီအနာဂတ်ကာလမှာတော့ ကားတွေကို hacking လုပ်တဲ့အဆင့်ကို ကူးပြောင်းသွားပါတော့မယ်။
၀ါရှင်တန်တက္ကသိုလ် University of Washington နဲ့ ကာလီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ် (ဆန်ဒီယာဂို) University of California at San Diego မှသုတေသီတွေဟာ မကြာမီကပဲ ကားနှစ်စီးကို အဝေးကနေ ဘရိတ် Lock ချနိုင်၊ အင်ဂျင်နဲ့ကားတံခါးတွေကိုပိတ်နိုင်ပြီး၊ အရှိန်ပြမီတာ speedo meter ရဲ့ပြကွက်ကိုပါ ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ hacking စွမ်းရည်ကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတို့ဟာ ယခုလိုကားတွေကို hacking လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ကားတစ်စီးမှာရှိတဲ့ electronic control system နဲ့ laptop တစ်လုံးကိုဆက်သွယ်ထားပြီး၊ အဲ့ဒီကွန်ပျူတာကို အခြားကားတစ်စီးပေါ်ကနေ ဒုတိယကွန်ပျူတာကိုသုံးပြီးထိန်းချုပ်တာ hacking လုပ်တာပါပဲ။ ၎င်းပညာရှင်များရဲ့ သုတေသနစာတမ်းကို ယခုအခါ အောက်ကလန်မှာပြုလုပ်တဲ့ IEEE Symposium On Security and Privacy ဆွေနွေးပွဲမှာ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီ့အတွက်ကြောင့် ကာလီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ် (ဆန်ဒီယာဂို) ကပညာရှင် စတီဗင်ဆဗေ့ခ်ျနဲ့ ၀ါရှင်တန်တက္ကသိုလ်မှပညာရှင် တာဒါယိုရှီခိုနိုင်တို့နဲ့တွေ့ဆုံကာ ၎င်းတို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုတွေအကြောင်း မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
သုတေသနအတွက် ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ထားသလဲဆိုတာ ပိုသိချင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့က ကားကို ရုပ်ပိုင်းအရ ထိတွေ့ချိတ်ဆက်တာလား။ ဒါမှမဟုတ် အဝေးကနေချိတ်ဆက်တာလား။
(ဆဗေ့ခ်ျ) စာတမ်းထဲမှာတော့ တကယ်လို့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသာ ကားကို access လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင် နောက်ဆက်တွဲဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲ အာရုံပြုထားတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာ ကို ကားထဲက diagnostics port အပေါက်မှချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ အဲဒီ port ဟာ ဒရိုင်ဘာရဲ့အခြမ်းက ဒတ်ရ်ှဘုတ်ရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။
(ခိုနို) - ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာတမ်းက သီးခြားခြိမ်းခြောက်မှုတွေအကြောင်း အာရုံစိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က အနာဂတ်မှာ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာမယ့်ကားတွေမှာ နည်းပညာပိုင်းအရ ဘယ် လိုကာကွယ်မှုတွေလုပ်နိုင်သလဲဆိုတာကိုပဲ စာတမ်းမှာအာရုံပြုလေ့လာထားတာပါ။
(ဆဗေ့ခ်ျ) - ၁၉၉၀ ခုနှစ်များတုန်းက PC တွေကိုပဲ ခင်ဗျားတို့ပြန်ကြည့်လေ။ အဲဒီ PC တွေမှာ ဆော့ဖ်ဝဲပိုင်းကအားနည်းချက်၊ လုံခြုံရေးယိုပေါက်တွေရှိခဲ့တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေက ဘာမှမထိ နိုင်စေခဲ့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒီတုန်းက PC တွေကို အိမ်တွေမှာပဲသုံးကြပြီး၊ အရာရာနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတာမှမဟုတ်တာ။ ဒီနောက်တော့ ကွန်ပျူတာတွေဟာ အင်တာနက်နဲ့ချိတ်ဆက်လာကြတဲ့ အတွက်၊ အားနည်းချက်တွေကလည်း ပြင်ပတိုက်ခိုက်မှုတွေကို ဖိတ်ခေါ်လာခဲ့ကြတာပါ။ ကားတွေကလည်း အခုတော့ ကွန်ပျူတာတွေလိုဖြစ်လာနေပါတယ်။ ကားတွေမှာ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်မှုတွေကလည်း တိုးလာနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီကိစ္စတွေက တကယ့်ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်မလာခင် ကားတွေထဲက system တွေကို ကာကွယ်မှုပေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကားတစ်စီးကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်စဉ်လေးနဲ့ ပြောပြနိုင်မလား။
စက်ပြင်ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကားပိုင်ရှင်ရဲ့ချစ်သူရည်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူတို့ဟာ ကားရဲ့စနစ်ကို access လုပ်နိုင်သူတွေပါပဲ။ သူတို့ကကားထဲကို ပရိုဂရမ်ကို download လုပ်နိုင်သူတွေပါပဲ။ သူတို့ကကားထဲကို ပရိုဂရမ်ကို download လုပ်မယ်။ ကွန်ရက်အဆက်အသွယ်ဖြတ်မယ်။ ပြီးရင်သူတို့ထည့်ထားတဲ့ code က သူအလုပ်သူလုပ်နေမယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ လူတွေသိဖို့ လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေထက် ပိုပြီးထူးခြားနေပါတယ်။
(ခိုနို) - ဒီနေ့ကာလမှာတော့ လူတိုင်းက Web Security နဲ့ botnet တွေအကြောင်းအာရုံစိုက်နေတယ်။ လာမယ့်နောက် ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ၁၀ နှစ်အတွင်းမှာ ကားတွေကိုလည်း အဲဒီလို စိုးရိမ်စရာစာရင်းထဲ ကျွန်တော်တို့မထည့်ချင်ပါဘူး။ CarShark လို့ခေါ်တဲ့ အဲဒီလို ပုံစံတိုက်ခိုက်မှုမျိုးကိုလုပ်နိုင်တဲ့ tool တစ်ခုကို ခင်ဗျားတို့ဖန်တီးထားတယ်နော် ဟုတ်တယ်မလား။ အဲဒီ software tool ကတော့ ကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တာပေါ့။ အဲဒီဆော့ဖ်ဝဲကို ကားထဲက OBD - II (On-Board Diagnostics II) port နဲ့ ပလပ်ထိုးတားတဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ run ထားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါက network ပေါ်မှာ လှုပ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ tool ကိုသုံးပြီး တစ်ယောက်ကကားကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးလား။ အဲဒီ tool ကို ကျွန်တော်တို့မဖြန့်ချိဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ tool ကို အဝေးကနေသုံးနိုင်တဲ့နည်းတွေတော့ရှိတယ် မလား။ ကျွန်တော်သုတေသနမှာ အဲဒါကိုထိန်းညှိနိုင်မယ့် မျှခြေကိုရှာနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က သတိပေးရုံသက်သက်လေသံမျိုးနဲ့ ပြောနေရတာကိုစိတ်မ၀င်စားပါဘူး။ အဲဒါဟာ အလုပ်ဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်တော်ခန့်မှန်းနိုင်မလား။ အဆုံးမတော့လည်း ဒါဟာ software ပါပဲဗျာ။ ခင်ဗျားကားပေါ်ကဆော့ဖ်ဝဲဟာ PC ပေါ်ကဆော့ဖ်ဝဲနဲ့တော့ အခြေခံအားဖြင့် ဘာမှမကွာခြားပါဘူး။ (ခင်ဗျားတို့လို) တရားဝင် သုတေသနရည်ရွယ်ချက်တွေအရလုပ်တာထက် မကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တစ်ယောက်က ကားတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ ခင်ဗျားတို့ထင်လို့လား။ ယနေ့ကာလမှာတော့ ဒီကိစ္စကို ပြဿနာတစ်ရပ်လို့ ကျွန်တော်တို့မယူဆပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို လူဆိုးတွေကတကယ်လုပ်မလာခင် သူတို့ရှေ့ကနေဦးဆောင်ဖို့ပါ။
ကားထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့ရော ဒီကိစ္စကို ခင်ဗျားတို့ဆွေးနွေးဖြစ်ပါသလား။
(ဆဗေ့ခ်ျ) - နာမည်တော့ ထုတ်မပြောနိုင်ပါဘူး။ သင့်လျော်ရာအဖွဲ့တွေနဲ့တော့ ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
သူတို့က အရေးတယူရှိရဲ့လား။ ဒါမှမဟုတ် ပယ်ချကြလား။
(ဆဗေ့ခ်ျ) - ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးဖြစ်သမျှလူတိုင်းကတော့ ဒီကိစ္စအလေးအနက်ထားတယ်။ အပြုသဘောနဲ့ ကြိုဆိုကြပါတယ်။
(ခိုနို) - ယနေ့ကမ္ဘာဟာ နည်းပညာနဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ကမ္ဘာပါ။ လူတွေက “ကွန်ပျူတာ” ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြားလိုက်ရင် laptop ဒါမှမဟုတ် desktop တွေလိုပဲ ပြေးမြင်နေကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနာဂတ်မှာမြင်ရမှာကတော့ ကွန်ပျူတာပစ္စည်းတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကထဲကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပေါင်းစပ်ဝင်ရောက်လာမှာကိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာတွေဟာ ကားတွေထဲ၊ medical devices ဆေးကုသရေးပစ္စည်းပစ္စည်းတွေထဲ၊ အိမ်တွေထဲမှာ ရောနှောပေါင်းစပ်ပြီး ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ လုံခြုံရေးကိစ္စတွေကို desktop ပေါ်က botnet တွေ၊ web browsing တွေလောက်နဲ့တင် မစဉ်းစားစေချင်ဘူး။ အနာဂတ်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာတွေ ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုပါ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ ကားတွေကို hacking လုပ်တဲ့ ဒီသု တေသနကလည်း အဲ့ဒီအမြင်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။-----
06-14-2010 09:53 PM #2
Re: အနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ကား Hacking ပြုလုပ်ခြင်း
အင်းခေတ်သစ် Diabolic တွေတော.လာတော.မယ်ထင်ပါရဲ.
ကားတံခါးလက်ကိုင်ကြားကနေ စက်ဘီးစမုတ်တံလေးထိုးထည်.ပြီး တံခါးဖွင်.လို.ရသလို
စတီယာရင်အောက်ကာဗာကိုဖွင်. ၀ါယာလေးနှစ်ခုကို ဂျန်ပါကြိုးလေးနဲ.ဆက်လိုက်ရင်အဲ.ကားကိုမောင်းလို.ရပါပြီ
:4: :4: စတီယာရင်လော.ချထားရင်တော.တစ်မျိုးပေါ့နော
ကံစေရာနောက် ၊ ကောက်ကောက်ပါအောင် ၊
ပုန်းရှောင်မရ ၊ ငါလိုက်ရပြီ ၊ ငါကအမှန် ၊ မလိုက်ချင်သေးပါ ။
ဖွေရှာသိုမှီး ၊ ပစ္စည်းရွှေငွေ ၊ အထွေထွေနှင်. ၊ ငါ.မြေငါ.အိမ် ၊
စည်းစိမ်ဥစ္စာ ၊ ရတနာကို ၊ ငါကခုံမင်၊မစွန်.ချင်လည်း ၊
ငါပင်စွန်.ရ ၊ ပစ်ခဲ.ရပြီ ၊ ငါကအမှန် ၊ မစွန်.ချင်သေးပါ ။
(အော်) မလိုက်မနေ ၊ နေချင်မရ၊မစွန်.ချင်လဲ ၊ စွန်.ပစ်ခဲ.ရ ၊
ကံကစီမံ ၊ ငါ.ကံအတိုင်း ၊ အချိန်ပိုင်းလာ ၊ ခိုနားရာမှ
ပြန်လည်ကာလှမ်း ၊ ဘ၀ကြမ်းကို ၊ ခရီးနှင်ပြီ ၊
ငါသည်အရင် ၊ သွားနှင်.ပြီ ။ ။
06-25-2010 04:17 PM #3
ပိုက်ဆံက မလိုက်နိုင်တာဆိုးတယ် အကိုရ...............
ဟုတ်တယ်နော် တီထွင်တဲ့ သူတွေက ဘာတွေ လျှောက်ထွင်နေလဲမသိဘူးနော်
Quick Navigation အထွေထွေသတင်းများ Top
ပုံကြမ်းများ (သို့မဟုတ်) ခံစားချက်ရုပ်ကြွင်းများကို တူးဖော်ခြင်း
By Dragon Warrior in forum ကိုယ်ပိုင်စာစုများ
Last Post: 09-06-2010, 01:54 PM
By zener in forum Portal/Forum/Blog/CMS